ग्लास्गोमा व्यस्त काशीराम - फिचर - कान्तिपुर समाचार
ग्लास्गोमा व्यस्त काशीराम
कार्तिक २१, २०७८ अब्दुल्लाह मियाँ
ग्लास्गो, स्कटल्यान्ड — ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरुको २६ औं सम्मेलन (कोप २६) सुरु भएको साता बितिसकेको छ । सम्मेलन अझै एक साता चल्ने छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर फर्किसकेका छन् । सम्मेलनमा अहिले वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव सहभागी छन् ।
सोही मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेल, जलवायु परिवर्तनको फोकल पर्सन राधा वाग्लेलगायत दर्जनौं विषयगत व्यक्ति सम्मेलनमा छलफल भइरहेका अलग–अलग मुद्दासम्बन्धी वार्ताहरुमा व्यस्त छन् ।
यो त भयो, सम्मेलनस्थल 'स्कटीस एक्जिबिसन सेन्टर' भित्रको कथा । सम्मेलनस्थल बाहिर मन्त्री, सचिव, अन्य कर्मचारी र विज्ञलाई भन्दा भ्याईनभ्याई छ–गुल्मीको सत्यवती, खैरेनीका काशीराम भण्डारीलाई । उनीसँग सम्मेलनभित्र प्रवेश गर्ने पास त छैन, तर सम्मेलनमा आएका सबैजसो नेपाली उनकै सहारामा सम्मेलनस्थलको ढोकासम्म पुग्छन्–पुगेका छन् ।
'ल भित्र जानु होला, पीसीआर जाँच गराएर आफ्नो काम सुरु गर्नुहोला', गैरआवासीय नेपाली संघ, स्कटल्यान्ड राज्यपरिषद्का अध्यक्ष भण्डारीको चर्या यसरी सुरु हुन्छ । ग्लास्गोमा भर्खर चिसो सुरु हुँदैछ । संसारका करिब २ सय देशका झण्डै ४० हजार मानिसहरु यो सम्मेलनमा आएका छन् । त्यही भएर यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या आवास व्यवस्थापन बनेको छ । होटलको भाउ आकाशिएको छ, तैपनि कोठा पाउन सम्भव छैन । 'यहाँ आउने प्राय:जसो सबै नेपालीहरुले रुम चाहियो दाइ भन्नुहुन्छ,' मुसुक्क हाँस्दै भण्डारी भन्छन्, 'समस्या तेर्‍याएपछि मिलाउनै पर्‍यो ।'
एयरपोर्ट आएर एक कल गर्ने जोसुकै नेपालीलाई समयले साथ दिए आफै पिकअप गर्न गाडी लिएर पुग्छन्, असम्भव भए लोकेसन दिएर आफू नजिक बोलाउँछन् । सम्मेलनमा भाग लिन सयभन्दा बढी नेपाली ग्लास्गो आएका छन् । नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न पाएकामा भण्डारी खुसी छन् । नेपालीहरुलाई गर्नुपर्ने यही व्यवस्थापनको चटारोका कारण उनको नेपाल जाने यात्रा पछि धकलिएको छ ।
सम्मेलनमा भाग लिन आएका प्रधानमन्त्री देउवासहित २० सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल होस् वा मन्त्री, सचिवलगायत सामान्य गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधि, सबैको आवासलगायत व्यवस्थापनमा भण्डारीको साथ छ । सरकारी अधिकारीले समेत यहाँ आउनेका लागि बासको व्यवस्थापन गर्न उनैलाई गुहारेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको आवासको पैसा बेलायत दूतावासले तिरे पनि भण्डारीले सम्मेलनस्थल नजिकैको पाँचतारे होटलमा आवास व्यवस्थापन गरेका थिए । 'सम्मेलनस्थल नजिक होटल पाउने सम्भावना नै थिएन', तीन महिनाअघि स्कटल्यान्ड राज्य परिषद्को अध्यक्ष बनेका भण्डारीले सुनाए, 'कता कताबाट कुरा गरेर म्यानेज गरियो ।'
कतिपय देशका उच्चस्तरीय नेतासमेत नजिक होटल नपाउँदा ग्लास्गोभन्दा बाहिरका होटलमा बस्न बाध्य भएका छन्, सार्वजनिक साधन रेल र बस चढेर ओहोरदोहोर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगै आएका वनमन्त्री यादव, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, योजना आयोगका सचिव केबलप्रसाद भण्डारी, वन तथा वातावरण सचिव कँडेल, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष माधव कार्की, प्रधानमन्त्रीका स्वकियसहित सुरक्षा टोलीलगायत सबै प्रतिनिधि बसेको होटल भण्डारीकै कारण सहज ढंगले व्यवस्थापन भएको हो ।
'पैसा तिर्छु भने पनि होटल पाउने अवस्था थिएन', भण्डारीले कान्तिपुरलाई सुनाए, 'चिनजानका हिसाबले होटलको व्यवस्थापन गर्न मलाई सजिलो भयो ।' अहिले पनि सम्मेलनमा नेपालीहरु आउनेक्रम जारी छ । उनीहरुको आवास व्यवस्थापन भण्डारीले नै गरेका छन् । केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र सचिव यादव कोइरालालगायत यहाँ आएका थिए ।
बेलायतबाट सिधै ध्वजावाहक विमान खुला गर्न सकिए नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । यहाँ बस्ने नेपालीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि यसबारे जानकारी गराए । मन्त्री आलेले त जसरी पनि बेलायतले नेपालको हवाई उडानमा राखेको कालोसूची हटाएर राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान बेलायत लिएरै आउने कसम खाएर फर्किएका छन् ।
करिब १७ वर्षदेखि स्कटल्यान्ड बस्दै आएका भण्डारीले यहाँ दुई वटा रेस्टुरेन्ट र दुई वटा होटल चलाइरहेका छन् । स्कटल्यान्ड को काउडेनन्बिथमा रहेको 'सिमला प्यालेस' रेस्टुरेन्ट उनको चर्चित छ । उनको रेस्टुरेन्टमा प्राय: नेतादेखि कर्मचारी र प्रहरीहरु खान आउने भएकाले उनीसँग राम्रो चिनजान छ । त्यही चिनजानले उनलाई होटललगायतको व्यवस्थापन गर्न सहजता भएको हो । यही रेस्टुरेन्ट पूर्वप्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले उद्घाटन गरेका थिए । गोर्डन काउडेनन्बिथकै स्थानीयसमेत हुन् । त्यो बेला उनी यहींबाट निर्वाचित सांसद थिए । भण्डारीले गोर्डनलाई नेपाली ढाकाटोपी र खादा लगाइदिएका थिए ।
नेपाली बफेटसहितको यो रेस्टुरेन्ट स्कट्ल्यान्डका सबैजसो नेता र कर्मचारीबीच चर्चित छ । स्कटल्यान्डको राजधानी एडम्बराबाट यो रेस्टुरेन्ट ३० माइल उत्तरमा छ । ग्लास्गो आएका पर्यटन सचिव कोइरालाले भण्डारीसँगको भेटपछि नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । 'यति लामो चिनजान भएको नाता र अनुभवले तपाईंले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो काम गर्न सक्नुहुन्छ', यादवले भण्डारीलाई भने ।
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७८ १६:२०
सरकारमा हुँदा पनि अदालत हाम्रै विरुद्ध प्रयोग भयो : ओली
'प्रचण्ड-बाबुराम बाँचे, बाबुरामले छोराछोरी बेलायत पढाए'
कार्तिक २१, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालत आफूविरुद्ध प्रयोग भएको बताएका छन् । उनले सेना र प्रहरी प्रयोग गर्न नसकिएपछि अदालत प्रयोग भएको आरोप लगाए ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'हामी सरकारमा हुँदा पनि अदालत हाम्रै विरुद्ध प्रयोग भयो । सेना पुलिस प्रयोग हुन पाएन । अदालत प्रयोग गर्दै पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री छुट्टी र अर्को प्रधानमन्त्री चयन गरियो ।'
ओलीले त्यसरी राज्यसत्ताको गलत प्रयोग भएको भनाइ राखेका थिए । उनले धर्म, संस्कृति, कानुन र नियम बनाएर त्यसरी प्रयोग गरिएको भनाइ राखे ।
सत्तारुढ गठबन्धनलाई लोकतन्त्रविरोधी भएको भन्दै ओलीले आक्रोश पोखेका छन् । उनले भने, 'पाँच दलीय गठबन्धन लोकतन्त्रका भक्षक हुन्, लोकतन्त्र भक्षी हुन् । यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ देश होइन ।'
ओलीले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा १७ हजारको मृत्यु हुँदासम्म पनि त्यसका नेता पुष्पकमल दाहाल बाँचेको बताए । उनले भने, 'प्रचण्ड बाँचे, १७ हजार मरे । बाबुराम बाँचे, बाबुरामका छोराछोरी त बेलायत पढ्थे ।'
बाबुराम भट्टराई भूमिगत हुँदा पनि उनका छोराछोरी बेलायत कसरी पढेका थिए ? भनेर ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।
'हामी बेलायत जान भिसा पाउँदैनथ्यौं । बाबुरामका छोराछोरीले भिसा पाउँथे । के जादु होला त्यसमा ? एउटा भूमिगत क्रान्तिकारी नेताका छोराछोरीको बाउको नाउँ त चाहिन्छ, नागरिकता चाहिन्छ, नागरिकता पाउन, पासपोर्ट पाउन । कुन पासपोर्टबाट जानुभएको ? कहाँ भिसा लाग्यो ? बाबुरामजी बताउनुस् त ?,' ओलीले थप प्रश्न गरे, 'बेलायतमा २, ४, ५ लाख खर्च हुन्छ महिनाको । कहाँ कमाउनुभएको थियो भूमिगत हिँड्दाखेरि ?'
माओवादी नेताहरू भूमिगत हुँदा युरोप घुमेको ओलीको दाबी थियो । उनले आफूहरूको प्रहरी रेकर्ड खराब भएको भनेर पासपोर्ट नपाएको बेला विद्रोही नेता भने युरोप घुमेको बताए । 'पुलिसको रिपोर्टले दिँदैनन्थ्यो । मैले २०४८ सालमा सांसद भएपछि पासपोर्ट बनाएको । हाम्रो पुलिस रेकर्ड खराब, प्रचण्ड-बाबुरामको पुलिस रेकर्ड खराब थिएन ?'
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७८ १५:४९